Gelbiskii Geerida- Q3aad - Abdikadir AskarAbdikadir Askar
Gelbiskii Geerida- Q3aad
Walaalkay muddo dheer is-ma aanu arag. Waxa aan kala maqnayn qiyaastii saddex sannadood oo aan badanka ka shaqaynayey Barriga Afrika. Abshir wuxu ahaa wiil aad u maskax badan oo aan si gaar ah u jeclaa. Wuu igu dhalasho xigay, waxa aanan ka weynaa laba sanno.
Waxa aanu ahayn walaalo dhib iyo dheefba soo maray, soonna wadaagay. Guud ahaa waxaanu ahayn afar walaalo ah: aniga, isaga iyo weliba laba hablood. Hooyaday iyo aabbahay waxa ay kala tageen in yar kadib markii aan ka guurnay Mareykanka ee aanu degnaasho rasmi ah ka dalbanay dawladda Kanada.
Aad ayaanu berigaa u yar-yareyn, dil-dilaaca ku sii kordhayey wada-noolashihii qoysakayga ma aanu sii odorsi karayn. Anaguna waxa aanu si aayar aayar ah u noqonay reer ba’ay oo kala irdhoobay.
Xidhiidhka annaga iyo aabahayo marnaba ma wanaagsanayn, duruufihii adka ee qurbaha nagu haleelay ayaa noo saamixi waayey in qoyskaygu sii waaro. Dabadeedna aabahayo muddo markuu Kanada sii joogay, wuxu ku laabtay dalkii oo uu ganacsi ka furtay, reer cusubna ku guursaday magaalada Boosaaso.
Marar badan oo uu naga soo war doonay waxa war ah oo farxad geliya nagalama uu kulmi jiray. Waxana si joogto ah caqabad noogu ahayd dareenka hooyaday oo si weyn u dhaawacmay. Taas oo nagu dagaali jirtay in aanu la xidhiidhno, ‘ aabbe naga dad doorsaday, oo meel kale looga yeedhay.’
Abshir, wuxu ahaa wiilka xaafaddayda noogu waxbarashada jecel. Waxa aan dareemi jiray inuu lahaa hibo gaar ah, una dheerayd maskax furnaan iyo dhiirranaan xad dhaaf ah.